Uchwepheshe we-Semalt: Ama-plugins we-WordPress wamahhala-I-Advice Top From Expert
Uma isayithi lakho le-WordPress linokuqukethwe okuningi futhi ukhathele izincazelo nemigomo ephindaphindiwe, kufanele ufake i-plugin ye-glossary ngokushesha. I-plugin ye-glossary isiza ukugwema okuqukethwe okuphindwe kabili futhi igcina izincazelo zakho nemigomo ehlelwe izinyanga emva kwezinyanga. Lawa ma-plugin we-WordPress akuvumela ukuthi uxhumane nemigomo yama-athikili akho kuya kwezincazelo kwi-glossary bese ulondoloza isikhathi sakho. Ama-plugins we-glossary akunikeza ithuba lokubonisa amagama afanele kumakhasi awamanye amawebhusayithi futhi uthathe izivakashi kusuka kwelinye ikhasi ukuya kwelinye, ukunciphisa izinga lakho lokunciphisa ngezinga.
Lapha u-Alexander Peresunko, isazi esihamba phambili esivela ku Semalt , ukhulume ngamapulaki amahle kakhulu futhi aphelele kunazo zonke ze-WordPress sites.
1. Ibhokisi lesichazamazwi
Ngenye yezinhlelo ezidume kakhulu ze-glossary for abasebenzisi be-WordPress. Uma ubheka ukuhlinzeka ngolwazi olunembile kanye nemigomo yezivakashi zakho, kufanele ufake le plugin bese uyivuselele ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ungakwazi ukufinyelela le plugin kusuka kwisiqondisi se-Plugins ye-WordPress yakho futhi ungashintsha izilungiselelo zayo njengebhulogi yakho.
2. Inkinobho yeClick2Refer Virtual
Uma ufuna ukuqondisa kabusha abafundi bakho emibhalweni ehlukene namakhasi ewebhu, isichazamazwi se-Click2Refer Virtual siyi-plugin ye-glossary efanele. Inezici ezihlukahlukene ezihlukile futhi ingahlanganiswa nanoma yisiphi isayithi se-WordPress noma ibhulogi. Izokusiza ukuthi ugcine izivakashi zihlanganyela kwisayithi lakho njengoba okuthunyelwe kwakho kwakhiwe kahle futhi kubonakala kuhle..
3. Chofoza kabili isichazamazwi Buka-up
Le plugin ye-glossary esabekayo ilula ukufaka futhi ikhululekile ngezindleko. Uma isebenza kahle ngendlela igama, liphakamisa ngayo. Uma usufake futhi usebenze le plugin ye-glossary kusayithi lakho le-WordPress, ungakwazi kalula ukuhlola ikhwalithi yokuqukethwe noma ama-athikili futhi ungathuthukisa isilulumagama ku-intanethi. Udinga nje ukufaka uhlu lwama-glossary ekhasini ngalinye lewebhu bese uqala ukuheha abantu abengeziwe kusayithi lakho, ukwandisa ukuthengisa kwakho futhi uthola imali eningi.
4. I-Encyclopedia Pro
Le plugin idala isikhombimsebenzisi esibonakalayo somsebenzisi ngokuhamba ngokuqukethwe kwe-alphabet kanye nezihloko zokuthumela. Le-plugin ye-glossary ye-glossary ayikho izindleko futhi ingasetshenziswa kokubili ama-WordPress namawebhusayithi we-blogger. Iqukethe uhlu olubanzi lwamagama esiNgisi, imigomo, ama-acronyms kanye nama-synonyms ongakhetha kuzo. Inguqulo yamahhala inezinombolo ezilinganiselwe zokukhethwa kukho, kodwa inguqulo yayo ekhokhelwayo izovula okuningi kwamadili nokunikezwa kwakho.
5. I-WP Glossary
Ngenye yama-plugin evelele kakhulu futhi aphezulu kunazo zonke abasebenzisi be-WordPress. Lokhu kwenziwa isichazamazwi nabathandi be-glossary futhi kulula ukufaka. I-plugin ikusiza ukuthi ugcine ukunakwa nokugxila kwabafundi bakho abagcinwe ngezinsizakalo zayo zamahhala kanye nesakhiwo esivelele.
6. Umlobi wezithombe
Nansi elinye idijithali elimangalisayo nelusizo kanye ne-plugin yesichazamazwi kuwe. Umlobi wezobuciko uvumela abasebenzisi ukuthi bahlele okuqukethwe kwabo kuwebhu futhi bafake ama-glossary kuwo wonke amakhasi ewebhu ngendaba yamaminithi. Asikho isidingo sokwenza noma yini ikhodi yakho ye-HTML njengoba le plugin yenza imisebenzi eminingi kuwe uma ifakwe ngokugcwele. Yize ingazange ibuyekezwe okwesikhashana, i-plugin isapholile ukuhamba nayo.